I-Firecastle - IntoKildare
Itholakala enkabeni yeMakethe Square, nangaphansi komthunzi weSonto LaseSt Brigid. IFirecastle igilosa lomndeni, isibiliboco, indawo ekubhakwa kuyo kanye nekhefi enesikole sokupheka kanye namakamelo okulala izivakashi ayi-10.
Uhla lomkhiqizo weFirecastle Fresh luhlinzeka ngezinhlobonhlobo zokudla okulungele ikhwalithi yokudlela okunye okwenziwe kwaduma endaweni yabo yokudlela ewinile imiklomelo iHartes yaseKildare. Zonke izinkwa, amakhekhe nokudla kulungiswa okusha esizeni nsuku zonke. Kanye nohla lomkhiqizo wabo amashalofu agcwele imikhiqizo yokudla yezingcweti ezinhle kunazo zonke ezisemakethe.
Futhi kuyikhaya lesikole sokupheka, esivumela izivakashi ukuba zisampule impilo ekhishini elisebenzayo nokuthi ngabe usaqala yini ukufuna amakhono amasha noma umpheki ozethembayo ofuna ugqozi, abafundisi bazonikela ngezinsuku ezahlukahlukene, izifundo zesigamu sezinsuku nezantambama kuwo wonke amazinga.
IFirecastle inikezela ngamakamelo wezivakashi zesitayela se-boutique ayi-10 okucatshangwe kahle ukuthi anikeze yonke induduzo nokusebenza ongakulindela kunoma ikuphi ukuphumula. Amanye amakamelo anemibono emangalisayo ngeSt Brigid's Cathedral.
Shopping, Amathilomu, Abakhiqizi, Amahhotela, isabelomali, 4 Star, Kildare
Isikwele Semakethe, Kildare, Isifunda iKildare, R51 AD61, Ireland.